ဆိုးသွမ်း: မိန်းခလေးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:28 AM
မိန်းခလေးပဲ ဖြစ်ချင်တယ် တဲ့...ဟုတ်မှလဲ လုပ်နော်...ကျားကျားလေးပြန်မဖြစ်ရင် ဘယ်နဲ့ လုပ်မလဲ...
မိန်းခလေးဖြစ်တိုင်း ငိုတိုင်းလည်းအမှတ်ရချင်မှ ရမှာပါ ဆိုးသွမ်းရယ် …
ဆရာရဲ့ စိတ်ထားပေါ်လဲမူတည်ပါသေးတယ် … တော်ကြာ ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့နွဲ့နေတယ်ထင်သွားမှဖြင့် ဒုက္ခ ဟီး ဟီး ….
ဟဟ တကယ်လားဗျို့... :P
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တော်တော် ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားတယ် .. ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ငါ့အကိုရယ်
တော်ကြာ ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ရင် ဒွတ်ခ...:P
စာမေးပွဲကြောင့်ပါ။ တခြားဘာမှ မဟုတ်ဘူးနော်။
အားပေးကြတယ်။ ရပ်ကွက်ကလည်းး)
စာမေးပွဲနီးရင် ငါ့စီအလည်လာစမ်းပါနယ်သားရာ ... အားပေးချင်လွန်းလို့ပါ ... တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ကွာ ... အားပေးစကားပြောချင်လို့လို့ပြောတာပါ ... ဟီးဟီး
ဖြစ်စေသတည်.း ယောက်ကျားဘဝကို ကိုးလ ကြာမှ ပြန်ရောက်စေသတည်. :P
ဟားဟား ကိုဆိုးသွမ်း မိန်းကလေးဖြစ်ချင်တဲ့ အကြောင်းက ဆန်းသကိုး ... အခြားတော့ မရှိပါဘူးနော် ... အဟုတ် ??? :D :D :D